SADC, Sandton : mihemotra lava, kivy ny FAT fa tsy vita ny sonia. – MyDago.com aime Madagascar
Nisintona tamin’ny roa ambinin’ny folo alina teo ho eo ny fivoriana teto Sadton, araka ny nambaran’ i Dr Salomao, sekretera mpanatanteraky ny SADC teo ampivoahana ny efin-trano fa tsy maintsy ho tohizana rahampitso manomboka amin’ny telo ora hariva ny dinika momba ny krizy eto Madagasasikara , ary tsy maintsy hahitana vahaolana izany.
Raha ny hitanay teto an-toerana dia tsy nahazo avara-patana ny ekipan’ny FAT, tsy tafiditra ny efin-trano fivoriana akory Ingahy Augustin Andriamananoro, Denis Andriamandroso, Murielle Soja (Zanaky CST Kaleta) raha nikasa hanao tsindry, kivikivy sy toa tsy mahasahy manantona ny mpanao gazety teny an-toerana
Mipetraka ny fanontaniana, raha ilay nambaran’ny FAT fa fanaovan-tsonia sisa atao eto Sandton, nahoana no tena handanian’ny SADC andro maromaro mihitsy ny raharaha Madagasikara? toa azo eritreretina sahady fa tsy ho eken’ny SADC ilay rangom-pohy terena ho rango-lava.
Aiza izay sonia natao teo?
2 pensées sur “SADC, Sandton : mihemotra lava, kivy ny FAT fa tsy vita ny sonia.”
f’angaha tsy sahy nakany ry Astérix Norbert, ry Général d’opérette Alain RAMAROSON, ry Désré RAMAKAVELO l’Apache,…. sa efa mahafantatra fa handamoka ny fihaonana? .. Ary aiza ry VyVato au visage d’hamster sy ry RAHARINAIVO le satan no tsy sahy mijanona any?
Sa matahotra ny ho tenenina quoi hoe « sans qualité » toy ny lehibeny?
12 juin 2011 à 23 h 25 min
Koa ny frantsay aza tsy nahasaky nandeha tany koa maika fa izay MPITATY RAN’olona ireo?
Efa tsy ra-kena intsony no tatazany fa ran’olona.Asa raha mba olona miteraka ihany ireo olona
ireo na momba daholo !
Diran-doza ny firenena manana olona toa an’ireo sy ny forongony,tokony ho araha- maso akaiky mihintsy ny
tarak’ireny dia hanafarana taranaka faramandimby ny RATSY VITANY TETO @ FIRENENA,ary ho raiketina @
Précédent Article précédent : Banga ny toeran’i Madagasikara !
Suivant Article suivant : Opening statement SADC Sandton 11 June 20011